aadan21 / August 8, 2016
iftineducation.com – Jaceylku waa dareen gudaha ah,mana dhinto, waxaa jiraan dad badan oo aan jecelnahay,laakin wey adag tahay inaad qirato jaceylkaas. Hadii aad xiiseyneyso inaad ogaato sidii aad ugu sheegan laheyd jaceylkaas raac talooyinkaan.
Dooro maalin ku haboon.
Maalmaha mashquulka ee shaqada ama waxbarashada loo kala cararaaya dadku badanaa waa kuwa daal iyo madax xanuun qabo,adigoo dhinacaasi eegaayaa waa inaad doorataa maalin ku haboon qorshaha aad damacsan tahay inaad u gudbiso qofka maskaxdaada mashquuliyey ee hurdada iyo soo jeedkaba kuu diiday, isku day inaad hesho maalin gaar kuu ah,kuna talo in laga yaabee nasiibku kuu hiiliyo.
Dooro habab kala duwan.
Go’áansatay inaad inaad ka hor qirato jaceylka aad u qabto waxaa kuu wanaagsan inaad doorato habab kala duwan oo aad ugu soo bandhigto sida inaad geeraaro jaceyl ah u qorto,hadiyo caddeyn u ah jaceylkaaga ama kulan qaas ah la yeelo hadii aad tahay qof dhiiran,hababkaan waxey abuuri karaan maalmo la xusuusto iney labadiina idiin noqdaan,waana muhiim inaad qofka aad jeceshahay aad si wanaagsan u taqaano. Marka aad qofkaas si fiican u taqaano waxaa kuu fuduaanaayo qorshahaga oo idil.
Ula hadal si cad
Hadii aad diyaar u tahay inaad u sheegato jaceylkaaga ula hadal si cad,waxba haka baqin,hana qalqalin. Ula hadal sida adigoo caadi iska dhigaaya,waa hubaal inaad shaki la’aan ku guuleysaneysid dagaalka nolosha.
Ka hor inta aadan ku dhaqaaqin inaad wajahdo xaqiiqda marka hor noqo qof isku kalsoon oo huba go’aanada uu qaatay,Noqo qof faraxsan waayo hadii aad adigoo murugeysan qofka aad hortagto waxaa laga yaabaa inuu murugada wejigaaga saaran ka dido. Aamin naftaada inta aadan qof kale ku fekerin inuu ku caawiyo,hana ka baqin marxalada ku hortaala.
Raaxada Ugu Macaan Xiliga Ciyaarta Sariirta
Qooto Qooto waa hees dad badan ka qoslisay aan is leeyahay dadka qaarna wey ka careysiisay. DAAWO CABDI MAAXI MUNYE QOOTO QOOTO 2016 HD